दलहरुको उधारो सपनामा अलमलिएको देशको भविष्य अब कता ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दलहरुको उधारो सपनामा अलमलिएको देशको भविष्य अब कता ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र बाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरि सकेका छन् । दुबै पार्टीका महत्वाकाँक्षी घोषणपत्र बारे राजनीतिक वृत्तमा यतिखेर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले ‘मुलुकमा राष्ट्रिय पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ’ भएको उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले घोषणा पत्र मार्फत देशबासीलाई १० वर्ष भित्र मुलुकमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लगायतका महत्वाकांक्षी सपना देखाएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछि पटक पटक मुलुकको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले २०४६ अघि ४९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको र आफ्नै प्रयासले अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा बेरोजगार भत्ता दिने र हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने आश्वासन दिइएको छ । ७ वटै प्रदेशमा विकास निर्माणको बाढी नै ल्याउने जनाइएको छ ।
८४ पृष्ठको घोषणा पत्रमा राखिएका मध्ये २५ प्रतिशत शब्द नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई गाली गलौज गरेर खर्च गरिएको छ । ‘बाम गठबन्धनका कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्न लागेको र त्यसलाई काँग्रेस बाहेक कसैले जोगाउन नसक्ने’ उल्लेख गरेको छ । घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ, प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र भनेको नेपाली काँग्रेसको निजी लगौंटी हो, त्यस बाहेक अरु कसैले प्रयोग गर्न जान्दैनन् र प्रयोग गर्न पनि हुन्न । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘मुलुक कम्युनिष्टवादतिर जाने डर’ भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कम्युनिष्ट सरकार आए जनताले रुन समेत नपाउने’ उल्लेख गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बाम पार्टीकै कारण मुलुकको परिवर्तन खहरे जस्तै अगाडि बढेको बताए । ‘खहरे शैलीमा छिटो भएको परिवर्तनले मुलुकको हित गर्दैन’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने– ‘बसन्तको पालुवा पलाए जस्तै बिस्तारै हुने परिवर्तनले मात्र मुलुक समृद्ध बन्छ ।’
घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्दा मुलुक संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ तर बहुदलीय शासनकालमा नेपाली काँग्रेसले दुई पटक बहुमत पाएर पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको बारेमा भने कहीं कतै बोलिएको छैन ।
नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको साता दिन नबित्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि संयुक्त रुपमा प्रतिवद्धता पत्र ल्याएका छन् । बाम गठबन्धनको २ सय २० पृष्ठको घोषणा पत्रमा पनि चाइनाको रेलदेखि झुपडीमा पाक्ने सेलसम्मका बिषय बस्तु राखिएका छन् । घोषणा पत्रमा विकास, निर्माण, कृषि पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति र भाषा सबै पक्षको बेलिविस्तार लगाइएको छ । विकास निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पत्रमा बाम गठबन्धनले वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलबलाई समय अनुकूल बढाउँदै लग्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले एमाले माओवादी केन्द्रको एकतालाई ‘लोकतन्त्र विरुद्धको गठबन्धनको आरोप लगाएको छ । बाम गठबन्धनले त्यसको बदलामा काँग्रेसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति हुन नदिने तथा राष्ट्रिय उद्योगलाई तहस नहस पारेको आरोप लगाएको छ । काँग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरु बन्द गराएपछि मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या आएको र लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । बाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत आउने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने दाबी गरेको छ । गठबन्धनले नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ५ हजार रुपैयाँ पु¥याई मुलुकलाई समाजवादसम्म पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको राजनीति घोषणा पत्र मार्फत अहिले नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच जुहारी चलेको छ । काँग्रेसले एमालेलाई अधिनायकवादको संज्ञा दिन थालेको छ । त्यस्तै एमालेले काँग्रेसलाई मुलुक बिगार्ने खलनायकको रुपमा चित्रण गरेको छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका सबै राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा जनतासँग यस्तै प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् तर त्यसलाई पुरा गर्नेतिर भने त्यति ध्यान दिएको पाइएको छैन ।
यी दुई प्रमुख दलको आरोप प्रत्यारोप बीच मुलुक निर्वाचनमा अगाडि बढेको छ । मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचनको महिनाको अन्त्यसम्ममा परिणाम आइसक्छ । बाम गठबन्धनले स्थानीय तहको नतिजा अनुसारको मत हासिल गरे बहुमत आउने संभावना रहन्छ । बाम गठबन्धनको बहुमत आए पुसको पहिलो सातामै कम्युनिष्ट सरकार बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आए नेपाली काँग्रेस पुसको जाडोसँगै कठांग्रिने र बाम गठबन्धनलाई राजा महेन्द्रसँग दाँज्दै पुस महिनालाई कालो दिनको रुपमा ग्रहण गर्नेछ ।
के-के छ गठबन्धनको सपना
नेपाली कांग्रेसको उधारो सपना